World Up To Date - Nhau dzakanakisa NHASI
Mumwe mukomana ane makore 14 okuberekwa anorovera garwe nezvibhakera kumeso kuti apukunyuke mushure mekunge chikara ichi chavharira wechidiki uyu mushaya uye kuedza kumuzvuzvurudza kuti afe.
June 2, 2022 kubudikidza arun
Mumwe wechidiki akaita chishamiso chekutiza shaya dzegarwe nekurirova mumusoro. Om Prakash Sahoo, 14, aive neshamwari dzake murwizi Kani kuIndia apo chikara ichi chakamubvarura pasi pemvura ndokumuzvuzvurudzira kurufu rwake. 1Mudiki akakwanisa kutiza kubva pashaya dzegarweChikwereti: Alamy... verenga zvakawanda
Dzvanya kuti ugovane paSkype (Inovhura muhwindo idzva)
Dzvanya kuti ugovane paTeregiramu (Inovhura muhwindo idzva)
Dzvanya kuti ugovane paReddit (Inovhura muhwindo idzva)
Dzvanya kuti utumire email kushamwari (Inovhura muhwindo idzva)
Dzvanya kudhinda (Inovhura muhwindo idzva)
Categories Last News Tags kuyaruka, makore, dhonza, Chikara, chiso, nguruve, mushure, inovhara, kesken, pukunyuka, shaya, rova, toward, rufu, mwana, nokuti, Zvake, anobata Leave mhinduro
Mumwe wechidiki akaita chishamiso chekutiza shaya dzegarwe nekumurova nemumusoro. Om Prakash Sahoo, 14, aive neshamwari dzake murwizi Kani kuIndia apo chikara ichi chakamubvarura pasi pemvura ndokumuzvuzvurudzira kurufu rwake. 1Mukomana akakwanisa kutiza kubva mushaya dze… verenga zvakawanda
Ndakatiza mhuri yangu yehama dzemaAmish pandaiva nemakore 18
Vamwe amai vakarererwa muAmish vakaratidza kuti vakadzi nevana vakabatwa sei kushungurudzwa kwepabonde uye "kurambwa" kubva kumhuri dzavo kana vakatyora mitemo. Emma Gingerich ane makore makumi matatu nematanhatu paakatiza hupenyu hwaaive amboziva aine makore gumi nemasere, aingova nedzidzo yegiredhi rechipfumbamwe ... verenga zvakawanda
Categories Last News Tags Amish, makore, when, kupunyuka, mhuri, makunakuna, ndanga ndine Leave mhinduro
Chakavanzika sainjiniya wekuBritain ane makore makumi matatu nematatu akapfurwa akafa aine shamwari mbiri musupamaketi yekuMexico achitenga.
MURUME wekuBritain akapfurwa akafa muchitoro chemuMexico pamwe chete neshamwari dzake mbiri apo vabereki vake vakavhiringidzika vakati akanga ari 'panzvimbo isiri iyo panguva isiri iyo'. Muinjiniya weSoftware Ben Corser, makumi matatu nemanomwe, anobva kuCornwall, akapfurwa achimhanya-mhanya muColima, kumadokero kweMexico, pa… verenga zvakawanda
Categories Last News Tags ystävät, makore, akapondwa, British, Chemhondoro, buy, game, shure, Engineer, Mexican, panguva, Chakavanzika, supermarketete, kupfura Leave mhinduro
'Zombie' shark inorwisa mhuka masendimita kubva kune yakakatyamadzwa dhivha
Inguva inotyisa iyo "zombie" shark inorwisa masendimita ayo emhuka kubva kune anokatyamadzwa diver, uye vese vanotaura chinhu chimwe chete. Euan Rannachan, makumi matatu nematanhatu, aive paGuadalupe Island, anenge makiromita mazana maviri kubva pamhenderekedzo yegungwa reMexico, apo hombe chena shark yakaonekwa ikaramba iri mumvura. … verenga zvakawanda
Categories Last News Tags kurwisa, ndakakatyamara, diver, masentimita, presa, shark, ZOMBIES Leave mhinduro
Putin akarapwa 'gomarara repamberi muna Kubvumbi' sezvo 'kuguma kungave pedyo' kune mudzvanyiriri weKremlin, vakuru vevasori veUS vanodaro.
AKARWARA Vladimir Putin akarapwa gomarara repamusoro muna Kubvumbi, vakuru vevasori vekuUS vanodaro. Vakuru vakuru vanonzi vakati vabatsiri mukati meKremlin "vanonzwa kuti kupera kwave pedyo" kumudzvanyiriri weRussia ane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe. 69Mutungamiri weRussia Vladimir PutinChikwereti: AP 2Putin anosangana naBoris Titov, mumiriri we… verenga zvakawanda
Categories Last News Leave mhinduro
Chii chinonzi rhinoplasty uye chii chinobatsira?
June 2, 2022 June 2, 2022 kubudikidza arun
Nekuda kwezvikonzero zvehutano kana zvekunaka, rhinoplasty isarudzo inoshanda yekugadzirisa kana kugadzirisa mhino. Vanhu vakawanda vari kutendeukira kune iyi nzira kugadzirisa dambudziko remhino. Asi chii chaizvo uye ndeapi mabhenefiti makuru? Chinyorwa chedu nhasi chakanangana nekujekesa… verenga zvakawanda
Chii chinonzi merchandising uye ndechei?
Kubatsira kwekutengeserana kunopfuura kushayiwa, sezvo hunyanzvi hunodiwa hunobatsira pane zvinenge zvichishuviwa kuti zviwanikwe. Nhasi, kushambadzira kunoshandisa ruzivo rwakasiyana rwakagamuchirwa mumakore apfuura kukurudzira kutenga nevatengi. Kutengesera kumakambani kuri… verenga zvakawanda
Barack Obama anotungamira Platinum Jubilee mutero kuna Mambokadzi kubva pasirese sezvo Papa naMacron vachitumira meseji.
BARACK Obama akati mambokadzi “anondiyeuchidza nezvaambuya vangu” apo vanhu vanobva kumativi mana enyika vaikorokotedza mambo uyu nenhoroondo yake yemakore makumi manomwe agara pachigaro. Iye ane makore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuzvarwa ndiye mambo wekutanga weBritish kupemberera jubheri replatinamu uye vateveri vehumambo pasirese ... verenga zvakawanda
Amai vakabatwa chibharo muchitima nemuongorori wematikiti nevamwe vatatu mushure mekunge vakwezverwa kupinda mukirasi yekutanga
VAMWE AMAI vanonzi vakabatwa chibharo nechikwata muchitima nemuongorori wematikiti nevamwe varume vatatu mushure mekukwezvwa kuti vapinde mungoro yekirasi yekutanga. Amai vadiki vevana vaviri vakasiya chigaro chavo chekirasi yehupfumi mushure mekupihwa imba ine air-conditioned panguva ... verenga zvakawanda
Peji1 Peji2 ... Peji1.358 Zvadaro →
Tumira kune email kero Zita rako Yako email kero kanzura
Kupinda hakuna kuendeswa. Tarisa email yako kero!
Kuongorora kweemail kwakundikana. Ndapota edza zvakare
Ndine urombo, yako blog haigone kugovera zvakatumirwa neemail.